Ulo oru 7 Tech na Ndi Nwanyi Africa N’oru Ochichi
Ulo oru 7 Tech na ndi nwanyi Africa n’oru ndi ndu
Breeze na enye ndi Nigeria Foreign Exchange Liquidity ka ha zuwa ahia na uwa niile
Ihe kpatara Naijiria ji chọọ Iwu Mbido
Mgbe nwanyi rutere elu nrịgo nke ọkwa nwoke na nwanyị n'Africa, ọ na-eweta akụkọ. N'ihi gịnị? Ihe kpatara ya bụ na ọganihu ụmụ nwanyị na-enwe na kọntinent a ka na-eji nwayọ nwayọ.
N’Africa, otu ọrụ ọdịnala ndị e nyere nwanyị bụ ịrụ ụlọ. Ọ bụrụ na ọ ga-arụ ọrụ ọ bụla, agbanyeghị na ọ ga-agbakwunye ọrụ ezinụlọ ya.
N'ezie, n'obodo ndị nna ochie dị otú ahụ, ọtụtụ ụmụ nwanyị na-eche na ha pere mpe ma mesịa banye n'ọrụ ndị na-akwụ obere ụgwọ.
Ya mere, ọ bụghị ihe mgbagwoju anya na a na-eme akụkọ banyere ọganihu ụmụ nwanyị n'ọkwa onye ndu n'ihi na ọ bụ ihe na-egosi na kọntinent ahụ na-abịaru nso ịnweta ụdị okike na itinye otu nwanyị n'otu oge.
Ọ bụ ezie na ụmụ nwanyị ole na ole tozuru etozu ruru n'ọkwa na ụlọ ọrụ ndị na-eduga, enwere "ụlọ uko ụlọ" nke na-egbochi imirikiti ịkwago ubube ahụ.
Na-aga site na Akuko Gender Global Gap Report 2020 nke na-ekwu na ọ ga-ewe 100 afọ ọzọ iji nweta nha anya nwoke na nwanyị ma ọ bụrụ na ọganihu ugbu a bụ ihe ọ bụla ga-aga, gọọmentị, NGO, ndị otu mkpakọrịta, ndị na-etinye ego, na ụlọ ọrụ na-agbada okpukpu abụọ na mbọ ha ịgbanwe ọnọdụ a.
Ọtụtụ e kwuru banyere uru nke nsonye na iche iche. Stats e hotara iji gosi na ukwuu onodi umu nwanyi na otu nzukọ, ihe Ọ ga-ekwe omume ị ga-arụ ọrụ karịa.
N'ikwekọ na Ebumnuche Ebumnuche Ebumnuche 10- Mbelata Aghọghị aha- UNkpụrụ Nkwado Women'smụ nwanyị nke UN na-arịọ ka ụlọ ọrụ guzobe ndị isi ụlọ ọrụ dị elu na-ahụ na onye ọ bụla nwere ohere nha anya.
N'ụzọ na-akpali mmasị, Africa na-anọgide na-abụ otu n'ime mpaghara kachasị mma maka nduzi ụmụ nwanyị dị ka Grant Thornton's Women in Business 2021 akụkọ.
The ọmụmụ Na-egosi na ọnụọgụ ụmụnwanyị Africa ndị na-edu ndú agbalitela nke ọma site na 29% na 2017 ruo 39% na 2021. N’azụ Africa n’afọ 2021 bụ ASEAN, ebe 38% nke ndị isi ụmụ nwanyị jupụtara, Latin America wee soro 36 %
Na mkpokọta, 83% nke mba ndị e nyochara edekọtara ọnụ ọgụgụ nke ndị isi ụmụ nwanyị na isi 30%. Nke a bụ n'ezie ezigbo mmepe na-eche na ọ nweghị mpaghara echebere- ka ukwuu ma ọ bụ pekarịrị ogo- site n'inwe ndakpọ akụ na ụba na-akpata ọrịa.
Na 2021, oke nwoke na nwanyi bu ihe kachasi nkpa banyere ndi otu dika ha na achota nha anya inweta oghere oru.
N'etiti 2019 ruo 2021, nyocha ụmụ nwanyị na Ahịa na-egosi na pasent nke ndị isi ụmụ nwanyị na ndị isi njikwa sitere na 15% gaa na 20% na 2020, na kwa isi ihe isii ọzọ na 2021.
Site na ịrị elu nke nwanyị na ndị isi ụmụ nwanyị na-arịwanye elu n'Africa, anyị nwere ike ịtụ anya na ugegbe iko ga-akụrịrị n'oge na-adịghị anya, na-enye ọtụtụ ụmụ nwanyị ohere ịnọ n'ọchịchị.
Enweghị usoro ọ bụla, n'okpuru ebe a bụ ụlọ ọrụ ntanetị 7 nwere ụmụ nwanyị Africa n'Abụ ọrụ
A kọwara dị ka onye na-eweta nkwukọrịta kasịnụ na Kenya, Safaricom ama maka ọrụ nnyefe ego na ekwentị mkpanaaka, ịkwụ ụgwọ, yana micro-Financing solution, M-Pesa, tinyere ngalaba Vodacom Group na 2007.
Sylvia Mulinge bụ onye isi ahịa ndị ahịa ugbu a ebe ọ na-ejikwa azụmaahịa ndị ahịa, Ahịa Ahịa, Ahụmị Ahịa, Mgbanwe Dijitalụ, Ọrịre & Nkesa, Ọrụ, na Atụmatụ Azụmaahịa & ricnye ọnụahịa.
N ’ọkwa ndị isi, Safaricom nwere ndị isi ọgbakọ iri na anọ, nke ise n’ime ha bụ ụmụ nwanyị.
Lori bu ihe ndi Kenya kwenyere na-emepe emepe e-logistics iji megharia uzo ahia ahia n'ofe Afrika. N’oge na-adịbeghị anya, a họpụtara Uche Ogboi, onye bụbu onye isi ọrụ na-ahụ maka ọrụ n’ụlọ ọrụ ahụ, dịka Onye Isi Nchịkwa ọhụrụ ya. Ọ ga
Otu n'ime ụlọ ọrụ unicorn nke Africa, nke dị na Nigeria Flutterwave malitere na 2016 iji gbanwee ịkwụ ụgwọ n'Africa, na ụwa ndị ọzọ.
N'ime oge ọnwa nke ụmụ nwanyị mba ụwa, ụlọ ọrụ fintech gosipụtara nkwado ya maka azụmahịa ụmụ nwanyị na-eduzi na Nigeria, Ghana, Kenya, Uganda, South Africa, Rwanda, na Zambia, Flutterwave site n'inye ha $ 2500 n'onyinye.
Bode Abifarin bụ onye isi ndị ọrụ Flutterwave. Ọ nọ na-arụ ọrụ ahụ kemgbe 2018.
Jumia bụ ụlọ ọrụ e-commerce kasị ukwuu n'Africa. Ebe ọ malitere ọrụ ya na Lagos na 2012, kemgbe ọ gbasaa na mba Africa ndị ọzọ gụnyere Egypt, Morocco, Ivory Coast, Kenya, na South Africa.
Jumia Nigeria onye bụbu onye isi ala, Juliet Anammah na-eje ozi ugbu a dị ka onye isi oche nke Jumia Nigeria yana Onye isi nke ihe omume ụlọ ọrụ n'ofe Africa; mgbe Tolulope George-Yanwah ka emere Jumia Ghana onye isi nchịkwa ọhụrụ na Eprel 2021.
Google LLC bụ nnukwu teknụzụ mba ndị America na-enye ọrụ na ngwaahịa metụtara ịntanetị, nke gụnyere teknụzụ mgbasa ozi n'ịntanetị. N'Africa, ụlọ ọrụ nwere ọtụtụ ụmụ nwanyị na-anọ n'ọkwá dị elu.
Ruo afọ iri, Juliet Ehimuan nke Naijiria bụ Director maka West Africa, na-ahụ maka iduzi atụmatụ Google na uto azụmaahịa na mpaghara ahụ, na ịkwanye atụmatụ ahụ maka ndị ijeri ndị ọrụ na-esote n'Africa. Na 2020, Google họpụtara Agnes Gathaiya Onye isi obodo maka East Africa.
Biglọ ọrụ nnukwu ụlọ ọrụ California, Apple bu onye ama-ama uwa nile maka igwe eletrọniki, komputa komputa, na oru ntaneti ya. Na mbido ọnwa Machị, Teju Ajani kwuputara na ya esonyela Apple dịka onye isi nchịkwa na Naịjirịa.
Site na nhọpụta a, Teju na-eme akụkọ ihe mere eme dịka onye mbụ na nwanyị mbụ nwere ọnọdụ dị otú a na Nigeria. N'ime ọrụ ọhụrụ ya, a na-atụ anya ka Ajani lekọtara ahịa Apple na azụmaahịa ya na Naịjirịa.
Mara maka ngwaahịa flagship, Remita, SystemSpecs Nwere bụ aha ụlọ na ọsụ ụzọ nke ụlọ ọrụ ngwanrọ na Africa, na-enye azịza siri ike nye ndị mmadụ n'otu n'otu, ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ n'ofe mpaghara Afrika ruo ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ iri atọ.
Ezinne Obikile bụ onye isi ndị isi na-ahụ maka mmepe nke ịkwụ ụgwọ SystemSpecs na akụrụngwa nchịkọta data iji hụ na ịkwụ ụgwọ na enweghị ego na ntinye ego.